Blockchain Observatory futhi Forum Oyoletha EU "phambili" ka Blockchain Tech - Blockchain Izindaba
EU Ukuqaliswa Blockchain Observatory nge Ethereum Ukuqalisa
ConsenSys, omunye zokuqala evelele kunazo zonke ku-ecosystem ethereum, uzosebenzisana European Commission on yayo EU Blockchain Observatory futhi Forum, okuyinto umkhankaso ngokusemthethweni ngoLwesine.
I mzamo oneminyaka emibili izokhokhela kuze kube € 340 million ($425 abayizigidi ezingu) kumaphrojekthi blockchain. IKhomishana kuqala isinyathelo entwasahlobo wokugcina, omema nesifiso salo ukwandisa ulwazi yesikhungo blockchain futhi basakaza ileja ubuchwepheshe.
“Njengoba kumdlali ezibalulekile emphakathini blockchain, ConsenSys kuzoletha oqinile wokuzibophezela blockchain ukuthuthukiswa, Ubuchwepheshe okuqinile nokuxhumana nge-jikelele blockchain ecosystem, futhi indlela ebhizinisi ukubandakanya babambimsuka kanye ochwepheshe ku-EU futhi emhlabeni wonke,” i-EC ngoLwesine esitatimendeni ekwembuleni ubambiswano.
ConsenSys, a global “ukukhiqizwa ibhizinisi studio” esakheka isofthiwe ngokuyinhloko blockchain ethereum, yasungulwa by Joseph Lubin, bani CoinDesk profiled for Iningi layo onethonya e Blockchain 2017 uchungechunge.
simemezelo weKhomishini kugcizelelwe ngokukhethekile nesifiso salo ukulungiselela izwe blockchain ukuze kuzuze emakethe olulodwa European, futhi waqaphela ukuthi umgomo oyinhloko Observatory futhi Forum ukwakha kumaphrojekthi ezikhona ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kuyo yonke imingcele.
UKhomishana Digital Umnotho nomphakathi uMariya Gabriel amazwana:
“Ngibona blockchain njengoba Tjhugulula umdlalo futhi ngifuna Europe ukuba iyahola sokuthuthuka. Sidinga ukusungula ilungelo kokunika amandla imvelo - Digital Single Market blockchain ukuze zonke izakhamuzi bangazuza, esikhundleni zezindwangu imizamo. I-EU Blockchain Observatory futhi Forum kuyisinyathelo esibalulekile kulolo hlangothi.”
Valdis Dombrovskis, i EC likamongameli ophethe ukuzinza kwezezimali, nezinsiza zezimali kanye Capital Markets Union, phakathi kwezinye amaphrojekthi, ngubani kwake ubeke amazwana isithakazelo EU kwezobuchwepheshe blockchain, wathi Observatory uyophinde ukuqondisa EU policymaking.
Wancoma umbono ubuchwepheshe blockchain, ethi “phakathi eziningi zobuchwepheshe ukuthi basuke ngemoto emisha digital, blockchain unakho ukuba zenguquko ngempela namasevisi ezimali kanye nezimakethe.
Rakuten oluqalisa cryptocurrency ayo
Ngo 2016, the Japanes ...
gov Korean uhlela ...
Thumela Previous:UPS Amafayela patent ukwamukela Bitcoin for emalokha
Thumela Landelayo:Double Digit Ukulahlekelwa Shanela Crypto Asset Market